Public profile သစ် သစ် Home | 24 Naryee
အမျိုးအစား ရွေးချယ်ပါ။ဖုန်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း စမတ်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်များ ဖုန်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖုန်းပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေးအိုင်တီနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ကင်မရာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တီဗွီနှင့်ဗွီဒီယို များ ကွန်ပျူတာနှင့်လက်(ပ်)တော့များ အဲကွန်း နှင့် ရေခဲသတ္တာ အခြားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ဂိမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထူးခြားပစ္စည်များ အထွေထွေအသုံးအဆောင်များဖက်ရှင်နှင့်အလှအပရေးရာ အမျိုးသမီးအသုံးအဆောင်နှင့်ပစ္စည်းများ အမျိုးသားအသုံးအဆောင်နှင့်ပစ္စည်းများ ကလေးပစ္စည်းများ ကျန်းမာရေးပစ္စည်းများ အလှကုန်များ အိတ်နှင့် ဖက်ရှင်ပစ္စည်းများ နာရီနှင့် မျက်မှန်များ ကျောက်မျက်ရတနာများဝါသနာ၊အားကစားနှင့် အိမ်၊ခြံအသုံးပစ္စည်းများ အနုပညာပစ္စည်းများ Events (အရေးကြီးသော ပွဲများ) တူရိယာပစ္စည်းများ အနုပညာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာများ Volunteers (အများအကျိုးပြု) အရုပ်၊ဂိမ်းနှင့် ၀ါသနာဆိုင်ရာပစ္စည်းများ စာအုပ်များ ပျောက်ဆုံး၊ ဖွေရှာ အားကစားပစ္စည်များ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂများ အိမ်အသုံးအဆောင်များ အိမ်မွေးတိရိစ္တန်များ လက်မှတ်များမော်တော်ယာဉ်(၀ယ်၊ရောင်း၊ငှား) အိမ်စီးကားများ လုပ်ငန်းသုံးကားများ မော်တော်ဆိုင်ကယ် ကားအပိုပစ္စည်းများ ယာဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ၀န်ဆောင်မှုများ Other Vehiclesအလုပ်အကိုင်များ အလုပ်ရှာဖွေသူများ အလုပ်များ အိုင်တီလုပ်ငန်းများ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ပညာရေးအလုပ်အကိုင်များ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း အိမ်အကူဝန်ထမ်းများ အရောင်းဝန်ထမ်း ငွေစာရင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော မားကက်တင်းဝန်ထမ်း စက်ရုံနှင့်အထည်ချုပ်ဝန်ထမ်းများ အထွေထွေသင်တန်းကျောင်းများ ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ ဘာသာစကားသင်တန်းများ စီပွားလုပ်ငန်းသုံးသင်တန်းများ အရောင်းနှင့် မားကက်တင်းသင်တန်းများ အနုပညာသင်တန်းများ ၀ိုင်းနှင့် ကျူရှင်များ အခြားသင်တန်းများအိမ်၊ခြံ၊မြေ တိုက်ခန်း(အရောင်း/အငှါး) အခန်း(အငှါး) အိမ်(အရောင်း/အငှါး) ကွန်ဒို(အရောင်း/အငှါး) မြေ(အရောင်း/အငှါး) ရုံးနှင့်လုပ်ငန်းနေရာ ဆိုင်ခန်း(ရောင်း/ငှါး)
ပင်မ စာမျက်နှာ အမျိုးအစားများ ကြေငြာတင်သည်။ နေရာဒေသများ အသုံးပြုသူ
မြေပုံ မကြည့်တော့ပါ။ ရောင်းသူတည်နေရာ။
စာရင်းသွင်းပြီးသူ	4 ဖော်ပြချက်များ
10000.00 Kyat Ks
Classic Lighter Code : 001551 Price : 11000 Kyats Lighter အနေနဲ့ရော Spinnal အနေနဲ့ပါ သုံးလို့ရတော့ လူငယ်တွေ အကြိုက်ပေါ့နော်.....ချစ်ခင်နှစ်သက်ရသူတွေထဲက ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူရှိရင် လက်ဆောင်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးပေါ့။ ======================================= Thit Thit Phone : 09797977551 / 09979333450 Facebook: https://www.facebook.com/thitthitstore Email : thitthit.minimart@gmail.com
ထင်မြင်ချက် ပေးနိုင်ပါသည်။	မျှဝေမည်။
Flamingo Lighter Product Code No:001550 Price : 10000 Kyats ဒီဇိုင်းလန်းလန်းနဲ့ စတိုင်ထုတ်ချင်သူများ အတွက်တော့ ကွက်တိပဲနော်.... Battery Charger ကို USB နဲ့အားသွင်းရုံပါပဲ။ မီးညှိ Coil တစ်ခု အပိုပါရှိတဲ့အတွက် Coil လောင်သွားမှာကို စိတ်မပူရတော့ဘူးပေါ့။ ====================================== Thit Thit Phone : 09797977551 / 09979333450 Facebook: https://www.facebook.com/thitthitstore Email : thitthit.minimart@gmail.com
Mould King Drone
Dagon Myothit (South) (ဒဂုံမြို.သစ်မြောက်ပိုင်း) (Yangon (ရန်ကုန်)) 1 ဓါတ်ပုံ
21000.00 Kyat Ks
Mould King Drone Code : 001391 Price : 21000 Kyat Mould King Drone ကတော့အခုမှစတင် မောင်းနှင်မည်သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။ ဈေးနှန်း ကသင့်တင့်ပြီး အကွာအဝေး (ပေ ၁၀၀) ပတ်လည်အတွင်းမှာကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းမောင်းနိုင်ပြီးတော့ ကလေးများသာမက လူကြီးတွေပါ ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ ======================================= Thit Thit Phone : 09797977551 / 09979333450 Facebook: https://www.facebook.com/thitthitstore Email : thitthit.minimart@gmail.com
Air Soft Gun K116D
Dagon Myothit (South) (ဒဂုံမြို.သစ်မြောက်ပိုင်း) (Yangon (ရန်ကုန်))4ဓါတ်ပုံများ
18000.00 Kyat Ks
Code no : 001489 Price : 18000 Ks Description : အရင်မြင်နေကျ Air Soft Gun တွေနဲ့ မတူပဲ Color & Design က သေနတ်အစစ် အတိုင်းပဲ ဒါတင်မကသေးဘူး သေနတ်မောင်းတင်လိုက်ရင် အနောက်ကမောင်းကပါအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သေနတ်မောင်းအားပြင်းတဲ့ အတွက် အပျော်တမ်း မုဆိုးလုပ်လို့လဲရတယ်နော်....
Email address: thitthit.minimart@gmail.com
မိမိတို့၏ ရောင်းလိုမှု၊ ရယူသုံးစွဲမှုတို့ကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး အင်တာနက်ပေါ်တွင် ကြော်ငြာပြီး ပိုမိုချောမောလွယ်စွာဆောင်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ၂၄နာရီ.com နှင့် 24naryee.com တို့ကို ရယူအသုံးပြုနိုင်အောင် ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။
Get 24 Naryee App on Goolgoe Play Store
2018 Powered by iBiz Service Provider. All Rights Reserved
သင့်ရဲ့ browser ကို ဆိုက်(ဒ်)ချုံ့ထားနိုင်ပါသည်။
ဒီဆိုက်ဒ်ရဲ့ အကျယ်ကိုကြည့်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ မိုဘိုင်းမှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။